युरोप वसन्त वा गर्मी मा एक भू-मध्य रिसोर्ट लागि जाने जाँदैछन् गर्ने मान्छे, copperhead पूरा गर्न निश्चित हुन। विषालु वा यो सुन्दर सर्प? यो मुद्दा पहिलो स्थानमा यात्री गर्न चासो हुनुपर्छ। र जवाफ अस्पष्ट छ। को copperhead colubridae परिवार पर्छ भन्ने तथ्यलाई त्यसैले, यो यसको शिकार squeezes, त्यसपछि Swallows। तर त्यसपछि किन तिनको दाँत?
यो विचार सर्प दाँत छ भने, त्यसपछि कि वा एक विषालु copperhead को प्रश्न, आफैमा गायब जस्तो थियो। नुकीले छ, त्यसपछि यो दु: ख गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो कथन छैन सम्पूर्ण सत्य हो। शिकार ठूलो बलिदान पक्रने समाप्त मात्र मौखिक गुहा को गहिराई मा स्थित सरीसृप दाँत, यो तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दछ। सानो आकार यो घांटी निमोठेर मार्नु गर्न सक्नुहुन्छ कारण छैन आफैलाई पशु समातिए। त्यसपछि उनले आफ्नो विष पंगु बना हुनेछ, र मात्र पछि यो खाना मा सुरक्षित यसलाई प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
अन्य सबै अवस्थामा मा, चिल्लो सर्प छेपारो खान्छ। तिनीहरूले त्यो आफ्नो venom बर्बाद गर्नुभयो जो एकदम सानो जनावर, किनभने तिनीहरूले आफ्नो शक्ति को आधारभूत आहार गठन। कहिलेकाहीं, एक सर्प एक छेपारो बुझिएन सक्नुहुन्छ ठान्नुहुन्छ गर्दा, त्यो सानो मुसा लागि शिकार गर्न थाल्छ। यी सरीसृप कहिलेकाहीं प्रत्येक अन्य खान सक्छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। तर यो शायद हुन्छ। को चिल्लो सर्प अर्को सिकार पाउन सक्नुहुन्छ जब यो हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, यो सर्प कारण को मान्छेको मासु खाने चलन गम्भीर यसलाई मान्छे को लागि साँच्चै सुरक्षित छ कि छैन भनेर विचार।
तथापि, मानिसहरूलाई कि वा एक विषालु copperhead को प्रश्न र खुला रहन्छ। संसारमा धेरै जनावर र कीराहरूबाट छन् भन्ने तथ्यलाई, मान्छे को लागि सुरक्षित छ कि विष। यो असुविधाको एक फरक प्रकारको डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ, तर मार्न छैन। तर जो केही बिष एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया थियो मान्छे छन्। उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति बाँच्न सक्षम हुनेछ को सांप को खानको, तर यो एक सामान्य मौरी stings यदि मर्नेछन्। त्यो चाहे वा एक विषालु copperhead, यो मानव शरीर को व्यक्तिगत विशेषताहरु मा निहित को प्रश्नको जवाफ छ। केही छैन अरूलाई गंभीर ज्वरो केही हप्ता अनुभव हुनेछ गर्दा तिनीहरू यस सर्प चिल्नु कसरी पनि नोटिस हुनेछ, र केही पनि मर्न सक्छ। कुनै पनि मामला मा, चेक छैन सर्प venomous copperhead वा छैन। आखिर, अज्ञात अन्त अघि कुनै रूपमा यो एक खानको मा हुनेछ।
Copperhead सजिलै आफ्नो उपस्थिति द्वारा मान्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कारणले गर्दा जो आफ्नो नाम हुन्छ तामाको छाया, छ। यसलाई आफ्नो विशेषता सुविधा छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ कालो पट्टी आँखा स्तर मा, र यो यस्तै सांप देखि यो अलग सेट गर्ने त्यो थियो। तर तपाईं एउटा सानो प्रतिनिधि detachment creeping scaly आँखा गर्न नजिकबाट हेर्न भने, जब तपाईं उसलाई पाउन? यो त गम्भीर परिणाम वहन जो कि तपाईंले पहिले एक खतरनाक सरसृप खानको हुन सक्छ।
यसरी, प्रायजसो कि विषालु copperhead को प्रश्नको जवाफ, नकारात्मक छ। तर, यो बीमा र यो तपाईं आफ्नो खानको लागि बलियो एलर्जी प्रतिक्रिया संग एक व्यक्ति हुन सक्छ रूपमा, राउन्ड यो सर्प प्राप्त गर्नुपर्छ।
डरलाग्दो बिरालो: गरिब प्राणी र प्रयोग geneticists
सुन्दर र रहस्यमय moonstones
के सपना पुस्तक गर्छ: घर को छत जो सपना
आईफोन रिकभरी मोड कसरी सक्षम?
फिलिप Coutinho: फुटबल जीवनी